Shiinaha 250ml oo tayo sare leh oo Nadiif ah iyo Warshadda dhalada leh ee loo yaqaan 'Amber Glass Diffuser Bottleer Botorber' iyo alaab-qeybiyeyaasha | Hoyer
250ml Kariin Cad oo Caano Ah iyo Dhalo Kala Duwan Amber Guluubka
Markaynu udugno udgoonkeenna kala-duwanaanta, waxaad la kulmi kartaa nasasho iyo bogsasho, gaar ahaan waxay kaa yarayn kartaa walaaca shaqada maalinlaha ah.
Tani waa ikhtiyaar aad u wanaagsan oo lagu soo dhaweynayo qof walba, gaar ahaan markii aad heshay booqasho. Waxay ku raaxeysan doonaan jawi deggan oo deggan.
Muga: 250ml / 8,3 oz
Dherer: 130mm / 5.1 inji
Dhexroor: 66mm / 2.6 inji
Midab: cad oo aan caadi ahayn, rinjiyeynta midab kale ayaa sidoo kale la aqbali karaa
Boggan waxaa ku jira 9 xirmooyin dhalo ah, waad dooran kartaa qofkasta oo aad jeceshahay, haddii aad u baahan tahay hagitaan dheeraad ah, fadlan si xor ah noola soo xiriir. Xalka ugu fiican, cawsduurku wuxuu ku ilaalin karaa meelahaaga inay udgoonaan saliidaada udgoon ee aad doorbideyso, taasoo yareyn karta buufiska.
Dhex dhig ulaha ul caws ah saliida dhalada, waxay ku siin kartaa badbaado badbaado urta hawada. Ku raaxayso qolkaaga wakhti kasta.
Codaynta joogtada ah: ulaha cawsdu waa sida ugu wanaagsan ee lagu nuugo saliidaha lagama maarmaanka u ah una faafo udgoonka hawada. Muraayada dhalada leh ee loo yaqaan 'Amber gala' waxay awood u yeelataa 'Better' in la nuugo saliidaha lagama maarmaanka u ah isla markaana hawada lagu baafiyo carafta. Dhalada mugdiga ah ee dhalada leh waxay kaloo ka ilaalin kartaa saliidaha lagama maarmaanka u ah shucaaca ultraviolet waxayna isticmaali karaan waqti dheer.
Iibsashada halista ah: Wixii arrimo ah fadlan hubi inaad nala soo xiriirto, waxaan sameyn doonaa wax kasta oo suurta gal ah si loo saxo qaladka.
Cabbirka Mugga: 250ml Height 13cmdhexroor 6.6cm oo midab cad leh
Cabbirka: 125ml Height 10.2cm
Cabbirka: 150ml Height 9cm
Dhexroor: 6cm qaab oo labajibbaaran
Cabbirka: 8.3 oz Dhererka: 5.1 injiDhexroor: 2.6 injiDhaladaani waxay leeyihiin qoorta ballaadhan oo cidhiidhi ah, oo midab cad leh oo mugdi ah)
Cabbirka: 4.1 oz Height 4.1 inch
Dhexroor: 2.2 inji
Dhaladaani waxay leeyihiin qoorta ballaadhan oo cidhiidhi ah, oo midab cad leh oo mugdi ah)
Cabbirka: 5 oz Height 3.5 inch
Dhexroor: 2.4 inji
Midab Nadiif iyo aamus daabacaad ama midab loo habeeyay sidoo kale waa la aqbali karaa
Hore: Dhalada caagga ah ee 100ml ee Cadcad Kala Dheecaanka Muraayadda ah ee Kaanbikada leh Qoorta 'Screw Neck'
Xiga: 200ml Round Round Round Shapes Nadiifi Dhalada Diffuser Dhalada
Nooc khaas ah oo 240ml Nadiifi Dhalo Dheecaan ah oo Garsoor leh ...